Chelsea Oo Lagasoo Diiday Dalabkii Ugu Horreeyay Ay Ka Gudbiyeen Haaland – Garsoore Sports
Chelsea Oo Lagasoo…
Kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa iska diiday dalabkii ugu horreeyay ee ay kooxda Chelsea ka gudbisay weeraryahankeeda Erling Haaland sida ay baahisay Sky Germany.
Chelsea ayaa u soo bandhigtay Dortmund midkood Tammy Abraham ama Callum Hudson-Odoi oo qeyb ay uga dhigtay heshiishka ay kula wareegeeyso Haaland, laakiin kooxda ka ciyaarta Bundesliga ayaa dooneysa inay sii heysato 20 jirkan aadka loo qiimeeyo.
The Blues ayaa isha ku heysa inay lasoo saxiixato weeraryahan cusub xagaagan kaddib markii ay ku dhibtooday goolka hortiisa mararka qaar xilli ciyaareedkii hore.
Inkastoo ay ku guuleysteen Champions League, haddana kooxda macalin Thomas Tuchel ma aysan helin joogitaan lagu kalsoonaan karo oo ku jira xerada ganaaxa, iyadoo Timo Werner iyo Tammy Abraham oo 12 gool oo wadaag ah dhaliyay.
Chelsea, Haaland ayaa u ah bartilmaameedkooda koowaad, laakiin ilo wareedyo ku dhow wadahadalada ayaa u sheegay Sky Sports News todobaadkan inay wajahayaan “howlgal aan macquul aheyn” oo ah dalabkooda ku aaddan saxiixiisa.
Sida laga soo xigtay Sky Germany, wakiilka Haaland Mino Raiola ayaa weydiisanaya gunno dhan 40 milyan oo yuuro oo qeyb ka ah heshiis kasta oo lagu doonayo weeraryahanka uu wakiil yahay ee Dortmund.
Marka lagasoo tago Haaland, Chelsea sidoo kale waxay xiiseyneysaa Romelu Lukaku iyo Harry Kane.
Si kastaba ha noqotee, Lukaku wuxuu sheegay inuu doonayo inuu sii joogo Inter Milan xilli ciyaareedka soo aaddan, halka Tottenham aysan dooneynin inay iska iibiso Kane, gaar ahaan koox ay xafiiltamaan.
Ugu dambeyn, Dortmund ayaan dooneynin inay lumiso xiddig kale oo muhiim ah kaddib isla markii ay u ogolaadeen Jadon Sancho inuu ku biiro Manchester United, oo heshiis 73 milyan oo ginni oo uu ugu wareegayo Old Trafford la filayo in lagu xaqiijiyo maalmo gudahood.